တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောကုမ္ပဏီတွေ ပေးတဲ့ဒုက္ခကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတဦး - Zet Star
တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောကုမ္ပဏီတွေ ပေးတဲ့ဒုက္ခကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ အခြေခံလူတန်းစားတဦး
အလုပ်ရတယ် အဆင်ပြေတယ် အခွန်ရတယ်ဆိုတဲ့ကချင်ပြည်နယ်… ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ ကယ်တင်ကူညီတာဝန်ယူပေးနိုင်ရန်…(မုန်းလို့ပြောတာ မဟုတ်ဘူး! အရှုံးအားကြီးနေမှုတွေကို သိစေဖို့ပါ)
ဒီနေ့မနက် ၉နာရီကျော်လောက်က မိမိကို ကျောင်းသားလေးတွေကဧည့်သည်လာတယ်ဆိုတော့ ရင်ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ဒုက္ခအလည်လာပြီထင်ပါရဲ့ဆိုပြီး ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း!!!
ကဲ! ဘာ ကိစ္စလဲ? ပြော ဆိုတော့…တပည့်တော်က မန်းလေးတိုင်း ဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ် ကလေးကျေးရွာကပါ နာမည်က သန်းထွန်း ပါ ဘုရား!!
ကိစ္စက တပည့်တော် ရွာပြန်မလို့ လမ်းစရိတ် လာတောင်းတာပါ ဘုရာ့ ဘယ်လောက်လဲ?မေးတော့ ၆ထောင်ဆိုရင် ရပါပြီ ဘုရား တဲ့လေ!ဒါနဲ့ ဘယ်ကလာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြော အသံဖမ်းထားမယ်
ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ပေးမယ် သဘောတူလား?မေးလိုက်တော့…တူပါတယ် ဘုရား တဲ့!ဒါဆိုရင်ပြော လိမ်လို့တော့ ဒုက္ခရောက်မယ်နော် ဘုရားရှေ့ကြီးမှာ!တင်ပါ့! မလိမ်ရဲပါဘူး ဘုရား အမှန်တိုင်းပြောပြပါ့မယ်!
နေ့စားခဆိုတာ မရှိတော့ဘူး! ရတာက ၁ရက် ၆ထောင်!သူတို့ကပြန်အလုပ်သမားဆီက ဖြတ်တာက ၅ရာဆိုတော့ ၅၅၀၀ ကျန်တယ်!စားစရိတ်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှကို မလုံလောက်ဘူး ပြီးရင် သူတို့ကကုမ္ပဏီက မီးစက်နိုးပေးတယ်ပြောပြီး မီးကြေးလို့ပြောပြန်ပြီး၁လကို ၆ထောင် ကောက်ပြန်တယ် ဘုရား!
အဲဒါနဲ့ တပည့်တော်ရဲ့သမီးလေးနဲ့မိန်းမကိုပြီးခဲ့တဲ့ ၁၇ ရက်လောက်က ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးတပည့်တော် အကြွေးကျေအောင်ဆပ် မှတ်ပုံတင်တောင်းပြီးခြေလျင်လျှောက်လာခဲ့တာ သူငယ်ချင်းတွေကို လမ်းစားရိတ်ရအောင်အဝတ်အစားတွေ ယူထားပေးပါပြောတော့ သူတို့ကလည်း အလုပ်မပြီးတော့ ဆန်တွေပဲရှိတာ
ဒါနဲ့ တပည့်တော်က အဝတ်အစားလိုက်ရောင်းကြည့်တော့ ဘယ်သူမှ မဝယ်ဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားကြည့်ပါ မင်း ဒီလိုတော့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကလူတွေပြောလိုက်လို့ ရောက်လာတာပါ ရထားခ ရရင် ထမင်းမစားဘဲရေသောက်ပြီးပြန်မယ် ရွာရောက်ရင် ရပြီ ဘုရား!
၆ထောင် မဟုတ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ပေးလိုက်မယ် အဝတ်တွေလည်းလိုက်ရောင်းမနေနဲ့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး! နောက်ပြီးတော့မင်း ငါ့ကို လိမ်ရင်တော့ ဘုရားကိုလည်း လိမ် သံဃာကိုလည်း လိမ်မင်း ကျိန်စာသင့်သလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ် မင်းကိုယ်တိုင် သိပေါ့ကွာ!
← ဗေဒင်မေးဖို့ မလို၊ ယတြာချေဖို့ မလိုဘဲ တက်စီယာဥ်မောင်းတွေ အမှန်တကယ် ဝင်ငွေကောင်းစေတဲ့နည်း
မိမိပိုင်မြေကို ဘုရား(သို့) ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းရာတွင် သိထားသင့်သည့်အချက်များ →